တဈစုံတဈဦးက သငျ့ အကွောငျး တှေးနပွေီဆိုရငျ ကွုံရမယျ့ ထူးခွားတဲ့ နမိတျမြား – Cele Myanmar
တဈစုံ တဈယောကျ က သငျ့ အကွောငျး တှေးနေ တာကို သိနိုငျမယျ ထငျလား? သိရော သိခငျြလား? ခုပွောပွမယျ့ အခကျြတှကေ သငျ့အကွောငျးကို တဈယောကျယောကျကေ တှးနတေဲ့အခါ သငျ့မှာ ခံစားနရေမယျ့ လက်ခဏာတှဖွေဈပါတယျ။
သငျ့အကွောငျး တှေးတယျ ဆိုတာမှာ သငျ့ကို ခဈြလို့ဖွဈစေ မုနျးလို့ဖွဈစေ တှေးနနေိုငျ ပါတယျ။ တကယျလို့သငျ့ကို ရနျပွုဖို့ထိတှေးနေ တယျဆိုရငျ ဒီအခကျြလေးတှေ ကိုသိထားတော့ သငျသတိထားနိုငျတာပေါ့.
ကဲ..ဘယျလိုတှခေံစားရမလဲ ဘာတှလေဲ ဆိုတာကွညျ့လိုကျရအောငျ..
ဒီယုံကွညျမှု ကတော့ အာရှနိုငျငံတှေ မှာ အမွဈတှယျနတေဲ့ ယုံကွညျမှုလေးပါနျော..တဈစုံ တဈဦးက သငျ့အကွောငျးတှေးနတေဲ့ အခါ သငျ့နှာခေါငျးဟာ ယားယံစပွုလာပွီး မကွာခငျ ထပျခါထပျခါနှာခြမှေု ကိုဖွဈစလေိမျ့မယျတဲ့။
ဒါကနမေကောငျးတဲ့ အခြိနျအတှကျတော့ အကြုံးမဝငျပါဘူးနျော။ အအေးပတျတာလညျး မရှိ နှာခေါငျးယားယံလောကျအောငျ ရှုရှိုကျ စရာလညျး မရှိပဲ အသားလှတျကွီး နှာတှထေခနြရေငျတော့ တဈစုံတဈဦးရဲ့ အတှေးဗဟိုမှာသငျရောကျနပွေီလို့ဆိုပါတယျ။
သူတို့ ဘာကိုတှေးနလေဲဆိုတာ ထပျပွောရမယျဆိုရငျ ၂ ခါနှာခြတောဟာ တဈစုံ တဈဦးက သငျ့မကောငျးကွောငျးပွောနပွေီ ဆိုတာပါပဲ။ ၃ ခါနဲ့အထကျ နှာခြတောကတော့ သငျ့ကောငျးကွောငျးတှေ ကိုတှေးနတေယျလို့ဖျောပွပါတယျ။
ဒါမှမဟုတျ တဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကိလှမျးနပွေီး သငျ့ကို ခဈြနတေယျလို့ဆိုပါတယျ။ အဲ့ဒီလူက ဘယျသူလဲဆိုတာကို ခနျ့မှနျးတဲ့နညျးလမျးလေးကိုလညျးပွောပွဦးမယျနျော..
ရိုးရာအစဉျအလာနညျးလေး အရဆို သငျ့ဘေးက လူတဈယောကျယောကျကို သူကွိုကျတဲ့ ဏနျး ၃ လုံးပါတဲ့ နံပါတျတဈခု ကိုပေးဖို့ပွောပါ။
ဒါကို အခွခေံထားပွီး တှကျခကျြရငျ သငျ့အကွောငျးကိုတှေးနေ တဲ့သူကို ခနျ့မှနျးလို့ရနိုငျပါတယျတဲ့..
ဘယျလို တှကျခကျြမလဲဆိုတော့ သငျ့ကို ၂၊ ၃၊ ၁ ဆိုတဲ့ဂဏနျး ၃ လုံးကို ပေးထားတယျ ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒါတှကေိုပေါငျးကွညျ့ပါ။ ၂+၃+၁=၆ ရတယျ။
အက်ခရာစဉျ အရဆို ၆ က “စ”မလား? ဆိုလိုတာက သငျ့ကိုစဉျးစားနသေူရဲ့နာမညျက “စ” လုံးနဲ့စတဲ့ သူတှဖွေဈနိုငျပါတယျ တဲ့.စညျသူတို့ စိုးသူတို့ဖွဈခငျြဖွဈမှာပေါ့..
နား သို့မဟုတျ ပါးမှာ မီးနဲ့တို့ခံရသလို ပူလောငျလာမယျ
ရိုကျပုတျမှု ရဲ့နောကျဆကျတှဲကို မွငျယောငျကွညျ့ပါ၊ ပူခနဲဖွဈသှား သလိုပေါ့၊ တဈစုံတဈဦး ကသငျ့ကို စဉျးစားနပွေီး မကောငျးကွောငျး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပွောနပွေီဆိုရငျ အဲ့ဒီလိုခံစားခကျြဖွဈလာပါတယျ။
သငျ့ကိုစကားလုံးတှေ နဲ့ရိုကျနှကျနသေလိုပေါ့။ ဒီခံစားမှုက သငျ့ရဲ့ပါးနဲ့နားက ရှကျလို့မကျြနှာ ရဲသှားတာမြိုး မဟုတျဘူးနျော။ တဈခါတဈရံ တျောတျောကွီးကို သိသိသာသာနီရဲနတောမြိုးဖွဈတာပါ?
တဈကယျလို့ သငျ့နားနဲ့ မကျြနှာက ပူလောငျတာမြိုး မဟုတျပဲ နှေးထှေးမှုကို ခံစားရရငျတော့ တ ဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကငျေးကွောငျးတှေ ကိုပွောနပွေီး သငျ့ကိုခဈြကွိုကျသလိုခံစားနရေပါတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ကွို့ထိုးခွငျးဟာ စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ထမငျးစားပွီးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ကိုရလေ့ရှိတယျ၊ ဒါပမေဲ့တခြို့ယုံ ကွညျမှုတှအေရ ကွို့ထို့ခွငျးဟာ သငျ့အကွောငျး စဉျးစားနသေူတဈ ဦး ရှိတယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျ သကျရောကျနိုငျပါတယျ။
ကံမကောငျးစှာနဲ့ တဈစုံတဈ ဦး ကသငျ့ကို မကောငျးတဲ့ စကားကိုပွောခွငျးသို့ မဟုတျသငျနှငျ့ ပတျသကျပွီး တိုငျကွားခွငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘယျသူတှေ ဘာစဉျးစားနတောကိုသငျပွောနိုငျမဘျ့နညျးလမျးလညျးရှိပါတယျ။
လူတခြို့အနားရောကျမှ သငျကွို့ထိုးခငျြလာတယျ ထိုးလိုကျတယျ။ ဒါက ဘာကိုပွောတာလဲဆိုတော့ ဒီလူတှဟော သငျ့ကိုထိ ခိုကျနဈနာအောငျတှေးနတေယျ ပွောခဲ့တယျဆိုတာပါပဲ။ ယခုသငျသူတို့ကို ထိပျတိုကျရငျဆိုငျနိုငျသညျ သို့မဟုတျ သငျကွို ကျသလို မေးမွနျးကွညျ့လို့ရပွီ။
ကွို့ထိုးခွငျးအတှကျကောကျခကျြ မခခြငျအခွားဖွဈနိုငျခြရှေိတဲ့ အကွောငျးတရားတှကေိုတော့ သငျ ဖယျရှားပဈဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
အာရုံကွော – ယားယံရောဂါမြားရှိခွငျး
သငျ့အိပျမကျထဲတှငျ တဈစုံတဈကို၊ အထူးသဖွငျ့ကွာမွငျ့စှာမတှေ့ရသေးသောတဈစုံ တဈဦးကို တှေ့မွငျပါကသူတို့ဟာ သငျ့အကွောငျးကိုစဉျးစားနနေိုငျပါတယျ။
သငျနှငျ့ပတျသကျသောသူတှရေဲ့ အတှေးတှကေ သငျအိပျမကျမကျဖို့အတှကျ ရုပျ ပုံလှာတှကေို ထုတျလှငျ့ပေးနိုငျပါတယျ။ အိပျမကျတဈခုက သငျ့ကိုအသေးစိတျအခကျြအလကျတှတေော့မပေးနိုငျပါဘူး။
အိမျမကျအရတော့ သူတို့သငျ့ကောငျးကွောငျးကိုတှေးလား ဆိုးကွောငျးကိုတှေးလဲဆိုတာတော့ ယတိပွတျမပွောနိုငျပါဘူး။ အိမျမကျတှကေ ဆနျးကွယျကွပါတယျ။
သငျ့အတှေးတှကေနတေဈဆငျ့လညျး အိမျမကျတှကေိုဖနျတီးနိုငျတဲ့အတှကျ သငျစှဲလမျးမှုမရှိပဲမကျတဲ့အိမျမကျကသာလငျြ သူတို့ သငျ့ကိုသတိရနတေယျ သငျ့အကွောငျးတှတှေေးနတေယျလို့ပွောနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
မရှငျးပွနိုငျတဲ့ ထိတှေ့မှုကို ခံစားရမယျ
တဈယောကျယောကျ သငျ့ကိုလာ ထိလိုကျသလို ရုတျတရကျ ခံစားဖူးပါသလား? ဒါဟာကြိနျးသပေေါကျ တဈစုံတဈ ယောကျက သငျနဲ့ပကျသကျပွီး စိုးရိမျပူပနျစိတျဖွဈနပွေီး ဆနျးကွယျတဲ့စိတျခံစားမှုတှခေံစားနရေတာလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။
တဈကယျလို့ သငျ့ကိုတ ဈစုံတဈယောကျက အလှနျပွငျးပွငျးထနျထနျစ ဉျးစားတှေးတောနရေငျ သူတို့ရဲ့ခံစားမှုက သငျ့ကိုရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အဆကျအသှယျနဲ့ဆငျတူတဲ့ မကျဆေ့တဈခုခုပို့ပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကတယျလီဖုနျး ဆကျသှယျသလို ပုံစံမြိုးလိုဖွဈပွီး သငျ့ကိုလာထိ လိုကျသလိုတောငျခံ စားစရေတာပါ။
ဒီအတှေးတှဟော ကောငျးလားဆိုးလား သခြောပေါကျပွောလို့တော့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကိုလာထိသလို ခံစားလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ထိတှေ့မှုလို ခံစားရရငျ ဒါက သငျ့ခဈြရသူ ဒါမှဟုတျ
သငျ့ကိုခံစားခကျြရှိနသေူတဈဦးထံကဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒီလိုမဟုတျပဲ ထိတှေ့မှုဟာ ညှိုးငယျကွောကျရှံသလို ခံစားရရငျ ဒါက သငျ့ကို စိတျဆိုးနသေူ သို့မဟုတျ သငျ့ကွောငျ့ ဝမျးနညျးနရေသူတဈဦးဦးထံက ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
သငျက ပြျောပြျောရှငျရှငျ ငွိမျငွိမျသကျသကျ စားသောကျနတေယျ၊ ဂရုစိုကျပွီးစားသောကျနတေုနျး မှာတောငျ အစာတှကေိုစားရတာ ခြောခြောမှေ့မှေ့မဝငျသှားဘူး၊
မြိုခရြတာခကျခဲတယျလို့ ရုတျတရကျခံစားရမယျ၊ ခြောငျးဆိုးခငျြသလိုဖွဈလာမ ယျ၊ ခန်ဓာကိုယျ တုနျလှုပျသှားမယျ ဆိုရငျ တဈခုခုတော့မှားနပွေီဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုသငျ့ဘေးပတျလညျမှာ သငျနဲ့ပကျသကျပွီး စိတျတငျးမာနတေဲ့လူတဈယောကျယောကျရှိနနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျပဲ ဘယျသူမှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရငျတော့ တဈစုံတဈယောကျရဲ့စိတျထဲမှာ
သငျ့အကွောငျးတှပွေေးလှားယောကျယကျခတျနနေိုငျပါတယျ။ အဝေးကွီးဖွဈနရေငျတောငျအဲ့ဒီတှေးတောမှုနဲ့တငျးမာမှုတှကေို သငျ့ရဲ့မသိစိတျကတဈဆငျ့ခံစားနရေတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
မကျြခမျးလှုပျတာတို့ မကျြလုံးယားယံတာတို့နဲ့ပကျသကျပွီး အယူသီးတဲ့ယုံကွညျမှုတှရှေိကွပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုခံစားရရငျ တဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကိုစိတျထဲမှာရှိနတေယျလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။
အမြိုးသားတှမှော ညာဘကျ မကျြလုံးယားယံခွငျးနဲ့လှုပျခတျခွငျးတို့က တဈယောကျယောကျက သငျ့ကောငျးကွောငျးကိုတှေးနပွေီး ဘယျဘကျဆိုရငျတော့အဆိုးတှကေိုတှေးနတေယျလို့ ညှနျပွနပေါတယျ။
အမြိုးသားတှနေဲ့အမြိုးသမီးတှကေတော့ ပွောငျးပွနျလို့နားလညျပေးပါနျော။ တဈကယျလို့ ဒါဟာ ဓါတျမတညျ့လို့ မကျြစိပွူနာရှိလို့ ဖွဈနတောဆိုရငျ ဒါတှကေို လဈြလြူရှုနိုငျပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှု အစားအစာ မောပနျးမှုနဲ့ အခွားအခကျြတှေ မကျြစိကို တုနျယငျစနေိုငျတာတော့ သတိပွုပေါ့နျော။
အပျေါမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ နိမိတျလက်ခဏာတှဟော သငျ့အကွောငျးတဈယောကျယောကျ စဉျးစားနတေယျ ဆိုတာ သိနိုငျတဲ့အရာတှပေါ။ ဒါတှကေို တခြို့တှကေ ယုံကွညျခငျြမှ ယုံကွညျပါလိမျ့မယျ။ ဒါတှကေိုအရေးမပါလို့ သငျ့စိတျထဲကဖယျထုတျထားမယျဆိုလညျး ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အတှေးတှဟော လောက မှာ အငျအား အကွီးဆုံးပါပဲ။ ပွောရမယျဆိုရငျစိတျပေါ့။ သငျ့မှာ အထကျကဖျောပွခဲ့သလိုထူးဆနျးတဲ့ ခံစားမှုတှခေံစားရမယျ ပျေါလာမယျဆို အပျေါကအခကျြတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျခငျြ့ခြိနျနိုငျပါတယျနျော..
တဈစုံ တဈေယာက် က သင့် အေကြာင်း တွေးနေ တာကို သိနိုင်မယ် ထင်လား? သိရော သိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အခက်ြတွေက သင့်အေကြာင်းကို တဈေယာက်ယောက်ကေ တွးနေတဲ့အခါ သင့်မွာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြဈပါတယ်။
သင့်အေကြာင်း တွေးတယ် ဆိုတာမွာ သင့်ကို ချစ်လို့ဖြဈေစ မုန်းလို့ဖြဈေစ တွေးနေနိုင် ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ထိတွေးနေ တယ်ဆိုရင် ဒီအခက်ြလေးတွေ ကိုသိထားတော့ သင်သတိထားနိုင်တာပေါ့.
ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲ ဆိုတာကြည့်လိုက်ရေအာင်..
ဒီယုံကြည်မှု ကေတာ့ အာရွနိုင်ငံတွေ မွာ အမြဈတွယ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပါနော်..တဈစုံ တဈဦးက သင့်အေကြာင်းတွေးနေတဲ့ အခါ သင့်နွာခေါင်းဟာ ယားယံစပြုလာပြီး မကြာခင် ထပ်ခါထပ်ခါနျွာခေမှု ကိုဖြဈစေလိမ့်မယ်တဲ့။
ဒါကနေမေကာင်းတဲ့ အခြိန်အတွက်တော့ အကြုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ အေအးပတ်တာလည်း မရွိ နွာခေါင်းယားယံလောက်အောင် ရှုရှိုက် စရာလည်း မရွိပဲ အသားလွတ်ကြီး နွာတွေထချနေရင်တော့ တဈစုံတဈဦးရဲ့ အေတွးဗဟိုမွာသင်ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ဘာကိုတွေးနေလဲဆိုတာ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂ ခါနျွာခေတာဟာ တဈစုံ တဈဦးက သင့်မေကာင်းကြောင်းပြောနေပြီ ဆိုတာပါပဲ။ ၃ ခါနဲ့အထက် နျွာခေတာကေတာ့ သင့်ကောင်းကြောင်းတွေ ကိုတွေးနေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါမွမဟုတ် တဈစုံတဈေယာက်က သင့်ကိလွမ်းနေပြီး သင့်ကို ချစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလူက ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ခန့်မွန်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းပြောပြဦးမယ်နော်..
ရိုးရာအစဉ်အလာနည်းလေး အရဆို သင့်ဘေးက လူတဈေယာက်ယောက်ကို သူကြိုက်တဲ့ ဏန်း ၃ လုံးပါတဲ့ နံပါတ်တဈခု ကိုပေးဖို့ပြောပါ။
ဒါကို အခြေခံထားပြီး တွက်ခက်ြရင် သင့်အေကြာင်းကိုတွေးနေ တဲ့သူကို ခန့်မွန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့..
ဘယ်လို တွက်ခက်ြမလဲဆိုတော့ သင့်ကို ၂၊ ၃၊ ၁ ဆိုတဲ့ဂဏန်း ၃ လုံးကို ပေးထားတယ် ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းကြည့်ပါ။ ၂+၃+၁=၆ ရတယ်။
အက္ခရာစဉ် အရဆို ၆ က “စ”မလား? ဆိုလိုတာက သင့်ကိုစဉ်းစားနေသူရဲ့နာမည်က “စ” လုံးနဲ့စတဲ့ သူတွေဖြဈနိုင်ပါတယ် တဲ့.စည်သူတို့ စိုးသူတို့ဖြဈချင်ဖြဈမွာပေါ့..
နား သို့မဟုတ် ပါးမွာ မီးနဲ့တို့ခံရသလို ပူလောင်လာမယ်
ရိုက်ပုတ်မှု ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ပူခနဲဖြဈသွား သလိုပေါ့၊ တဈစုံတဈဦး ကသင့်ကို စဉ်းစားနေပြီး မေကာင်းကြောင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြောနေပြီဆိုရင် အဲ့ဒီလိုခံစားခက်ြဖြဈလာပါတယ်။
သင့်ကိုစကားလုံးတွေ နဲ့ရိုက်နွက်နေသလိုပေါ့။ ဒီခံစားမှုက သင့်ရဲ့ပါးနဲ့နားက ရွက်လို့မက်ြနွာ ရဲသွားတာမြိုး မဟုတ်ဘူးနော်။ တဈခါတဈရံ တော်တော်ကြီးကို သိသိသာသာနီရဲနေတာမြိုးဖြဈတာပါ?
တဈကယ်လို့ သင့်နားနဲ့ မက်ြနွာက ပူလောင်တာမြိုး မဟုတ်ပဲ နွေးထွေးမှုကို ခံစားရရင်တော့ တ ဈစုံတဈေယာက်က သင့်ကေင်းကြောင်းတွေ ကိုပြောနေပြီး သင့်ကိုချစ်ကြိုက်သလိုခံစားနေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကြို့ထိုးခြင်းဟာ စိတ်အေနွာက်အယွက် ဖြဈစေနိုင်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတဲ့ အခါမွာ သူတို့ကိုရေလ့ရွိတယ်၊ ဒါပေမဲ့တခြို့ယုံ ကြည်မှုတွေအရ ကြို့ထို့ခြင်းဟာ သင့်အေကြာင်း စဉ်းစားနေသူတဈ ဦး ရွိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ကံမေကာင်းစွာနဲ့ တဈစုံတဈ ဦး ကသင့်ကို မေကာင်းတဲ့ စကားကိုပြောခြင်းသို့ မဟုတ်သင်နွင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခြင်းဖြဈနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာစဉ်းစားနေတာကိုသင်ပြောနိုင်မဘ့်နည်းလမ်းလည်းရွိပါတယ်။
လူတခြို့အနားရောက်မွ သင်ကြို့ထိုးချင်လာတယ် ထိုးလိုက်တယ်။ ဒါက ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ဒီလူတွေဟာ သင့်ကိုထိ ခိုက်နဈနာအောင်တွေးနေတယ် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ယခုသင်သူတို့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်ကြို က်သလို မေးမြန်းကြည့်လို့ရပြီ။
ကြို့ထိုးခြင်းအတွက်ကောက်ခကြ် မချခင်အခြားဖြဈနိုင်ျခေရွိတဲ့ အေကြာင်းတရားတွေကိုတော့ သင် ဖယ်ရွားပဈဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
အာရုံကြော – ယားယံရောဂျါမားရွိခြင်း
သင့်အိပ်မက်ထဲတွင် တဈစုံတဈကို၊ အထူးသဖြင့်ကြာမြင့်စွာမေတွ့ရေသးသောတဈစုံ တဈဦးကို တွေ့မြင်ပါကသူတို့ဟာ သင့်အေကြာင်းကိုစဉ်းစားနေနိုင်ပါတယ်။
သင်နွင့်ပတ်သက်သောသူတွေရဲ့ အေတွးတွေက သင်အိပ်မက်မက်ဖို့အတွက် ရုပ် ပုံလွာတွေကို ထုတ်လွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မက်တဈခုက သင့်ကိုအေသးစိတ်အခက်ြအလက်တွေတော့မေပးနိုင်ပါဘူး။
အိမ်မက်အရေတာ့ သူတို့သင့်ကောင်းကြောင်းကိုတွေးလား ဆိုးကြောင်းကိုတွေးလဲဆိုတာတော့ ယတိပြတ်မေပြာနိုင်ပါဘူး။ အိမ်မက်တွေက ဆန်းကြယ်ကြပါတယ်။
သင့်အေတွးတွေကနေတဈဆင့်လည်း အိမ်မက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက် သင်စွဲလမ်းမှုမရွိပဲမက်တဲ့အိမ်မက်ကသာလျင် သူတို့ သင့်ကိုသတိရနေတယ် သင့်အေကြာင်းတွေတွေးနေတယ်လို့ပြောနိုင်မွာဖြဈပါတယ်။
မရွင်းပြနိုင်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို ခံစားရမယ်
တဈေယာက်ယောက် သင့်ကိုလာ ထိလိုက်သလို ရုတ်တရက် ခံစားဖူးပါသလား? ဒါဟာကြိန်းသေပေါက် တဈစုံတဈ ယောက်က သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဖြဈနေပြီး ဆန်းကြယ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေခံစားနေရတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တဈကယ်လို့ သင့်ကိုတ ဈစုံတဈေယာက်က အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စ ဉ်းစားတွေးတောနေရင် သူတို့ရဲ့ခံစားမှုက သင့်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်နဲ့ဆင်တူတဲ့ မက်ဆေ့တဈခုခုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်သလို ပုံစံမြိုးလိုဖြဈပြီး သင့်ကိုလာထိ လိုက်သလိုတောင်ခံ စားစေရတာပါ။
ဒီအေတွးတွေဟာ ကောင်းလားဆိုးလား သျေခာပေါက်ပြောလို့တော့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုလာထိသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့အခြိန်မွာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထိတွေ့မှုလို ခံစားရရင် ဒါက သင့်ချစ်ရသူ ဒါမွဟုတ်
သင့်ကိုခံစားခက်ြရွိနေသူတဈဦးထံကဖြဈပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ထိတွေ့မှုဟာ ညှိုးငယ်ကြောက်ရွံသလို ခံစားရရင် ဒါက သင့်ကို စိတ်ဆိုးနေသူ သို့မဟုတ် သင့်ကြောင့် ဝမ်းနည်းနေရသူတဈဦးဦးထံက ဖြဈပါလိမ့်မယ်။
သင်ကျေပာ်ျေပ်ာရွင်ရွင် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် စားသောက်နေတယ်၊ ဂရုစိုက်ပြီးစားသောက်နေတုန်း မွာတောင် အစာတွေကိုစားရတာျေချာေခာမွေ့မွေ့မဝင်သွားဘူး၊
မြိုချရတာခက်ခဲတယ်လို့ ရုတ်တရက်ခံစားရမယ်၊ျေခာင်းဆိုးချင်သလိုဖြဈလာမ ယ်၊ ခန္ဓာကိုယ် တုန်လှုပ်သွားမယ် ဆိုရင် တဈခုခုတော့မွားနေပြီဖြဈပါတယ်။
ဒါဆိုသင့်ဘေးပတ်လည်မွာ သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်တင်းမာနေတဲ့လူတဈေယာက်ယောက်ရွိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူမွ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ တဈစုံတဈေယာက်ရဲ့စိတ်ထဲမွာ
သင့်အေကြာင်းတွေပြေးလွားယောက်ယက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ အေဝးကြီးဖြဈနေရင်တောင်အဲ့ဒီတွေးတောမှုနဲ့တင်းမာမှုတွေကို သင့်ရဲ့မသိစိတ်ကတဈဆင့်ခံစားနေရတာဖြဈနိုင်ပါတယ်။
မက်ြခမ်းလှုပ်တာတို့ မက်ြလုံးယားယံတာတို့နဲ့ပက်သက်ပြီး အယူသီးတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရွိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုခံစားရရင် တဈစုံတဈေယာက်က သင့်ကိုစိတ်ထဲမွာရွိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အမြိုးသားတွေမွာ ညာဘက် မက်ြလုံးယားယံခြင်းနဲ့လှုပ်ခတ်ခြင်းတို့က တဈေယာက်ယောက်က သင့်ကောင်းကြောင်းကိုတွေးနေပြီး ဘယ်ဘက်ဆိုရင်တော့အဆိုးတွေကိုတွေးနေတယ်လို့ ညွှန်ပြနေပါတယ်။
အမြိုးသားတွေနဲ့အမြိုးသမီးတွေကေတာ့ ပြောင်းပြန်လို့နားလည်ပေးပါနော်။ တဈကယ်လို့ ဒါဟာ ဓါတ်မတည့်လို့ မက်ြစိပြူနာရွိလို့ ဖြဈနေတာဆိုရင် ဒါတွေကို လျစ်လြူရှုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု အစားအစာ မောပန်းမှုနဲ့ အခြားအခက်ြတွေ မက်ြစိကို တုန်ယင်စေနိုင်တာတော့ သတိပြုပေါ့နော်။
အေပ်ါမွာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာတွေဟာ သင့်အေကြာင်းတဈေယာက်ယောက် စဉ်းစားနေတယ် ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ ဒါတွေကို တခြို့တွေက ယုံကြည်ချင်မွ ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကိုအေရးမပါလို့ သင့်စိတ်ထဲကဖယ်ထုတ်ထားမယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အေတွးတွေဟာ လောက မွာ အင်အား အကြီးဆုံးပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ့။ သင့်မွာ အထက်ကေဖ်ာပြခဲ့သလိုထူးဆန်းတဲ့ ခံစားမှုတွေခံစားရမယ် ပေါ်လာမယ်ဆို အေပ်ါကအခက်ြတွေနဲ့ နှိုင်းယွဉ်ချင့်ခြိန်နိုင်ပါတယ်နော်..